Somaliland: Lacago Malaayiin Doollar Ah Oo La Lunsaday Sanadkii 2017 – Goobjoog News
Guddiga Ilaalinta iyo dabagalka Hantida ee golaha wakiillada Baarlamaanka Somaliland ayaa maanta sheegay in shakhsiyaad iyo masuuliyiin ka tirsanaa xukuumaddii hore ee Somaliland ay lunsadeen hanti iyo lacago kala duwan.
Dhismaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka Awdal waxaa ku baxday 70-kun oo doollar.
88,800 oo doollar oo loogu talo galay roogga cagaaran ee garoonka kubadda cagta ee Burco oo aan weli la dhisin.
Waasaaradda xannaanada xoolaha oo iibsatay Shaybaadh (Lab) balse la waayay.
194-kun oo doollar ayaa la siiyay dhismaha garoonka kubadda Cagta ee Shulaac oo magaalada Hargeysa laga dhisayo.